ဂြိုလ်တုဓါတ်ပုံနှင့် ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်တို့ဖြင့် မိုးလေဝသအခြေအနေကို ခန့်မှန်း လေ့လာခြင်း « MMWeather Information BLOG
« သင်္ကြန်ကာလ မိုးရွာသွန်းနိုင်ခြေ ငလျင်အန္တရာယ် နှင့် ပတ်သက်၍ ပညာရှင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းပြီး စစ်ဆေးဆောင်ရွက်သင့် »
By mmweather.ygn, on March 29th, 2013
NOGAPs (U.S.Navy’s Operational Global Atmospheric Prediction System Model)
ဂြိုလ်တုဓါတ်ပုံများသည် တိမ်ဖြစ်ပေါ်မှု အခြေအနေ၊ အထူအပါးနှင့် ရွေ့လျားမှုတို့ကို ဖေါ်ပြပြီး ကောင်းကင်မှ တိမ်ကင်းစင်မှု အခြေအနေ နှင့် မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုတို့ကို ခန့်မှန်းနိုင်သော်လည်း အပူချိန်၊ ဖိအား၊ လေတိုက်ခတ်မှု နှင့် အမြင့်ပေအလိုက် ကွဲပြားသည့် အခြေအနေတို့ကို ခန့်မှန်းနိုင်ခြင်း မရှိသဖြင့် ကွန်ပျူတာ မော်ဒယ်နှင့် ဂြိုလ်ဓါတ်ပုံ (၂)မျိုးပေါင်းစပ်ထားခြင်းမှ ရရှိသော ရလဒ်များကို ပုံတွင် ဖေါ်ပြခြင်းဖြင့် ကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Satellite pictures providearealistic depiction of cloud cover, texture, and movement. They can be used to estimate where precipitation might fall or where skies are clear. However, satellite pictures can not provide quantitative information such as temperature, pressure, winds, or geopotential height ataspecific level. The combination of both satellite and model output producesapowerful tool for the synoptic meteorologist, the aviator, or the marine scientist.
ဤစာမျက်နှာတွင် ပင်လယ်ရေမျက်ပြင်ညီ အမြင့်မှ ဖိအားပြမြေပုံကို default အဖြစ် တင်ပေးထားပြီး ပုံပါ link များမှ တစ်ဆင့် မိမိတို့ လေ့လာလိုသည်များအား ဆက်လက် ကြည့်ရှုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
နည်းပညာ, မိုးရွာသွန်းမှုခန့်မှန်းခြေ, မိုးလေဝသအခြေအနေ, ရေပြင်ညီဖိအား, လေတိုက်ခတ်မှုအခြေအနေ « သင်္ကြန်ကာလ မိုးရွာသွန်းနိုင်ခြေ ငလျင်အန္တရာယ် နှင့် ပတ်သက်၍ ပညာရှင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းပြီး စစ်ဆေးဆောင်ရွက်သင့် »
« သင်္ကြန်ကာလ မိုးရွာသွန်းနိုင်ခြေ ငလျင်အန္တရာယ် နှင့် ပတ်သက်၍ ပညာရှင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းပြီး စစ်ဆေးဆောင်ရွက်သင့် »	Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum